YUTUBA ဖုန်းမှဗီဒီယိုများဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း - ဖုန်းကို - 2019
YouTube ဗီဒီယိုသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ Download
သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ Youtube ကိုမှဗီဒီယိုကယ်ဖို့အတော်လေးအနည်းငယ်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ အဆိုပါပြဿနာကိုသူတို့မူပိုင်ချိုးဖောက်အဖြစ်သူတို့သုံးစွဲဖို့အဆင်မပြေပေမယ့်ရိုးရှင်းစွာတရားမဝင်သာဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်ကဤပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်အပေါငျးတို့သဗွီဒီယိုမျှဝေပိုင်ဆိုင်ရာကို Google ကကြိုဆိုပါတယ်ကြသည်မဟုတ်မသာပေမယ့်ရိုးရှင်းစွာတားမြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါရန်လုံးဝဥပဒေရေးရာလမ်းလည်းမရှိ - ရုရှား၌မကြာသေးမီကမရရှိနိုင်, YouTube ကိုပရီမီယံ - ထိုအဆင့်မြင့်ဗားရှင်း (နိဒါန်းသို့မဟုတ်စဉ်ဆက်မပြတ်) စာရင်းသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
သူ၏ "အမိမြေ" ၌ဤဝန်ဆောင်မှုအချိန်ကြာမြင့်စွာရရှိနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ YouTube ကိုပရီမီယံ, ပြည်တွင်းနေရာများ 2018 ၏နွေရာသီရရှိခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ၏တစ်လနှင့်အတူစတင်ခြင်း, တစ်ခုချင်းစီအသုံးပြုသူပုံမှန်အားသိသိသာသာဟာသူ့ရဲ့အဓိကစွမ်းရည်ချဲ့ထွင်, YouTube ကိုစာရင်းသွင်းနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးပရီမီယံအကောင့်ပေးသောအပိုဆောင်း "ချစ်ပ်" ၏တဦးတည်းကနောက်ပိုင်းမှာအော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုဘို့ဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်အကြောင်းအရာဒေါင်းလုပ်တိုက်ရိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မတိုင်မီဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့စာရင်းပေးသွင်းမှုနှင့်, မပါလျှင်, ကိစ္စကိုအတည်ပြုပေးပါ။
မှတ်ချက်: သငျသညျ Music ကို Google Play သို့စာရင်းသွင်းခြင်းရှိပါက YouTube ကိုပရီမီယံအားလုံးကိုလက်လှမ်းမီအလိုအလျှောက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။
အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာသင်၏ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်သင်၏မိုဘိုင်းစက်ကိရိယာနှင့် tapnite အိုင်ကွန်ပေါ် Youtube ကို app ကိုဖွင့်ပါ။ ပေါ်လာသော Menu ထဲမှာ, select လုပ်ပါ "Paid စာရင်းသွင်းမှာယူခြင်း".
နောက်ထပ်, သင်ပြီးသားရှုမြင်သုံးသပ်ကြစာရင်းသွင်းထားသောလျှင်, လက်ရှိညွှန်ကြားချက်အရေအတွက် step4မှ skip ။ ပရီမီယံအကောင့် activated မထားလျှင်, စာနယ်ဇင်း "လအခမဲ့" သို့မဟုတ် "အခမဲ့ကြိုးစားပါ", ပြထားတဲ့ဖန်သားပြင်၏အရာပေါ် မူတည်. ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အနည်းငယ်စာရင်းသွင်းခြင်းကမ်းလှမ်းသောယူနစ်, အောက်က, သင်ဝန်ဆောင်မှု၏အခြေခံအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရနိုငျသညျ။
တစ်ဦးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ရန် - "ဘဏ်ကဒ် Add" သို့မဟုတ် "ကို PayPal အကောင့် Add"။ ရွေးချယ်ထားသောငွေပေးချေမှုစနစ်အား ပတ်သက်. လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ, အဲဒီနောက်စာနယ်ဇင်း "ဝယ်ယူမည်".
မှတ်ချက်: ဝန်ဆောင်မှု YouTube ကိုပရီမီယံငွေပေးချေမှုကို အသုံးပြု. ၏ပထမဦးဆုံးလတစ်လစဉ်အတွင်းဖယ်ရှား, ဒါပေမယ့်ကဒ်သို့မဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်၏စည်းနှောင်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်မရနိုင်ပါ။ တိုက်ရိုက်အလိုအလျှောက်သက်တမ်းတိုး subscription, သင်မူကားအစဉ်အမြဲပိတ်ထားနိုင်သည်, သူသညျမိမိတစ်ဦးပရီမီယံအကောင့် "paid-up 'ကာလ၏အဆုံးတိုင်အောင်အတက်ကြွပါလိမ့်မည်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုခဏခြင်းတွင်သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ကြေးပေးသွင်းပြီးနောက်, သငျသညျအပေါငျးတို့သ features တွေ Youtube ကိုပရီမီယံနှင့်အတူဖတ်ရှုဖို့သတိပေးခံရလိမ့်မည်။
သင်သည်ထိုသူတို့ရှုမြင်သို့မဟုတ်ပဲ click နှိပ်နိုင်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါ entry ကို Skip" ယင်းကြိုဆို screen ပေါ်မှာ။
အကျွမ်းတဝင် YouTube ကို interface ကိုအနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသောလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏အန်းဒရွိုက်-powered စက်ပေါ်ရှိဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုသောဗီဒီယိုကိုရှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ပုဒ်မခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင် subscriptions ကိုအတွက်အဓိက videhostinga ရည်ညွှန်း, ရှာဖွေရေး function ကိုသုံးနိုင်သည်။
ကစားစတင်ရန် tapnite preview ကိုဗီဒီယိုရွေးချယ်မှုသတ်မှတ်တော်မူပြီးမှ။
တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို button ကိုအောက်တွင်တည်ရှိပါလိမ့်မည် "Save" (ကစက်ဝိုင်းထဲမှာဆင်းမြှား၏ပုံရိပ်နှင့်အတူ Penultimate,) - ကစာနယ်ဇင်းရန်လိုအပ်ပေသည်။ ထိုခဏခြင်းတွင်, ဤစတင်ပြီးနောက်, သင်ဖိုင်ကို download, အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်အပြာရောင်ရန်၎င်း၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်, နှင့်အကွာအဝေးတဖြည်းဖြည်းဒေါင်းလုပ်လုပ်အချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုနှင့်အညီ, ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏သင်တန်းကာလအတွင်းအကြောင်းကြားစာ bar မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယိုတစ်ကားကို Download ပြီးသွားရင်သင့်ရဲ့ထဲတွင်နေရာပါလိမ့်မည် "စာကြည့်တိုက်" (အောက်ခြေ panel က applications များအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ tab ကို), အပိုင်းအတွက် "သိမ်းဆည်းဗီဒီယိုများ"။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်ဒီကနေ, သင်ပြန်ဖွင့် start သို့မဟုတ်နိုငျသညျ, "ဟုအဆိုပါ device ကိုမှဖယ်ရှားရန်"သင့်လျော်သောမီနူးကို item ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်။
မှတ်ချက်: YouTube ကိုပရီမီယံ features တွေများဖြင့်တင်ထားသောဗီဒီယိုကိုသာဤလျှောက်လွှာထဲမှာကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကတစ်ဦး Third-party ကစားသမားအတွက်ကစားမည်သူမဆိုအခြားကိရိယာသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းပြောင်းရွှေ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ထို့အပြင်: ယင်းကိုယ်ရေးဖိုင် menu ကတဆင့်နိုင်သမျှသောရရန် setting များကို app ထဲမှာ Youtube ကို, သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ:
အဓိပ္ပာယ် downloads, အခြေအနေများ (သာ Wi-Fi ကိုအပေါ်သို့မဟုတ်မ);
ဖိုင်တွေ (ပြည်တွင်းရေးကိရိယာ၏မှတ်ဉာဏ်, သို့မဟုတ် SD ကဒ်) ကိုသိမ်းဆည်းရန် destination;
ဆွဲယူတဲ့ဗီဒီယိုများဖျက်ခြင်းနှင့်သူတို့ drive ပေါ်တွင်အာကာသသိမ်းပိုက်ရှုမြင်;
"မျော" ပြတင်းပေါက်၏ပုံစံ၌၎င်း, တစ်ဦးအသံဖိုင် (ဖုန်းနှင့်အတူသော့ခတ်နိုင်ပါသည်) သက်သက်သာအဖြစ် - အခြားအရာများအနက် YouTube ကိုပရီမီယံကြေးပေးသွင်းနှင့်အတူမည်သည့်ဗီဒီယိုနောက်ခံအကြောင်းပြောရင်နိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်: အခြို့သောဗီဒီယိုများအား Download လုပ်ပါသူတို့လူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်ပါသည်သော်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကသူတို့ရဲ့စာရေးဆရာများအားဖြင့်သတ်မှတ်ကန့်သတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာဒီရုပ်သံလိုင်းပိုင်ရှင်ဖုံးကွယ်သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ဖို့ဆက်လက်စီစဉ်ရှိကြောင်း, ဘာသာပြန်များ၏ပြီးစီးစိုးရိမ်။
သင်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းချက်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်လျှင်, ပထမနေရာနှစ်သိမ့်၌သင်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မည်သေချာဘို့ Youtube ကိုပရီမီယံကြေးပေးသွင်းသင်သည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာထားရှိခြင်း, သင်သည်ဤ hosting အတွက်အတူနီးပါးမည်သည့်ဗီဒီယိုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်, ဒါပေမယ့်လည်းစောင့်ကြည့်သို့မဟုတ်ယင်း၏နောက်ခံနားထောင်နိုင်သည်သာ။ ကြော်ငြာမပါ - အဆင့်မြင့် features တွေ၏စာရင်းထဲတွင်မယ့်သေးငယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဆုကြေးငွေ။
Apple ထုတ်ကုန်အဖြစ်တခြား hardware နှင့် software ပလက်ဖောင်းသုံးစွဲသူများ၏ပိုင်ရှင်များအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအတော်လေးတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကက်တလောက်ထဲတွင်အကြောင်းအရာကြည့်ရှုရန်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်သူတို့ဒေတာကွန်ရက်များကန့်သတ်ထက်ကျော်လွန်များမှာပင်လျှင်, လူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရုပ်ရှင်ကယ်တင်နှင့်အနာဂတ်အတွက်အော့ဖ်လိုင်းကကြည့်ရှုဖို့ဝန်ဆောင်မှုပရီမီယံ-subscription ကိုအလှဆင် AppleID မှချည်ထားသော iPhone ကို, YouTube အက်ပ, iOS လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
YouTube ကို iPhone အတွက် Download
(ထို browser ကိုမှတဆင့်ဝန်ဆောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်အဘို့, အဆိုပြုထားသောနည်းလမ်းကိုသုံးပြီး download, ဗီဒီယိုကဖြစ်နိုင်မဖြစ်) iOS အတွက် YouTube အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်။
သင်၏ Google-အကောင့်ကနေ login နဲ့ password ကိုသုံးပြီး system ကိုသို့ Log:
YouTube အပလီကေးရှင်း၏အဓိကမျက်နှာပြင်၏အထက်ညာဘက်ထောင့်ရှိအသုံးအစက်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ထို့နောက်ကိုထိပုတ်ပါ "login" နှင့်သုံးစွဲဖို့ကြိုးစားနေအကြောင်းမေးမြန်းမှုအတည်ပြု "Google.com" ခွင့်ပြုချက် tapnuv များအတွက် "Next ကို".
သင့်လျော်သောလယ်ကွင်း username ကိုရိုက်ထည့်ပါပြီးရင် Google ကန်ဆောင်မှုကိုရယူအသုံးပြုတဲ့စကားဝှက်ကလစ် "Next ကို".
ဤနေရာတွင် subscribe "YouTube ကိုပရီမီယံ" အခမဲ့စမ်းသပ်:
settings ကိုဝင်ရောက်ဖို့မျက်နှာပြင်ရဲ့အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာသူတို့ရဲ့အကောင့် Tapnite ကိုယ်ပွား။ ပွင့်လင်းတဲ့ item စာရင်းကို Select လုပ်ပါ "Paid စာရင်းသွင်းမှာယူခြင်း"အဲဒီစာရင်းထဲမှာမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဦးမည် "အထူးကမ်းလှမ်းမှု"အပိုဆောင်း features တွေ၏အကောင့်အတွက်ရရှိနိုင်ပါဖော်ပြချက်များ။ လင့်ခ်ကိုအသာပုတ် "Read more ... " ဖော်ပြချက်အောက်မှာ "YouTube ကိုပရီမီယံ";
အဆိုပါဖွင့်ပါခလုတ်ကိုဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အခမဲ့ကြှနျုပျတို့ကိုကြိုးစားပါ"ထိုအခါ "Confirm" App Store မှာမှတ်ပုံတင်အကောင့်ဒေတာတွေနဲ့အောက်ခြေဧရိယာကနေ supernatant ၌တည်၏။ အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်အသုံးပြု AppleID ကစကားဝှက်ကိုထည့်ပါ, အသာပုတ်ပါ "ပြန်သွား".
Apple ရဲ့အကောင့်ရှေ့တော်၌ထိုငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ်ထားသောရသေးပါက, ဒါတောင်းဆိုရန်သောအရာကို၏နိဒါန်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တို့ "Continue" ဤအလိုအပ်ချက်များကိုအောက်မှာ tapnite "ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်" နှင့်ငွေပေးချေ၏နည်းလမ်းများ၏ဒေတာအတွက်ဖြည့်ပါ။ သင်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းပြီးသည့်အခါစာနယ်ဇင်း "ပြီးပြီ".
iOS အတွက် YouTube အက်ပရီမီယံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူအောင်မြင်သောဝယ်ယူမှု၏အတည်ပြုချက်စာရင်းသွင်းခြင်းတစ်ဦး display ကိုပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပါသည် "ပြီးပြီ"သငျသညျ tapnut ချင်သော "အိုကေ".
အသုံးပြုမှု YouTube စာရင်းသွင်းအခမဲ့ကာလအပေါ်ကဒ် AppleID မှငွေပေးချေမှုနှင့် "ဝယ်ယူ" binding အချိန်တွင် action ကိုအကောင့်ကိုငွေကြိုလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အလိုအလျှောက်သင်ဦးစားပေးကုသမှု၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးမတိုင်မီသည့်အချိန်တွင်မဆိုပယ်ဖျက်နိုင်သည်အခကြေးငွေများအတွက်ရှည်ရက်ပေါင်း 30 ရဲ့အဆုံးမှာသက်တမ်းတိုးဖို့!
ကိုလည်းကြည့်ပါ: iTunes ကိုမှာသင့်စာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်ဖို့ကိုဘယ်လို
နောက်ကျောကိုသင်ပြီးသားသုံးခုဆလိုက်၏ပရီမီယံ-ဗားရှင်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုမျှော်လင့်ရှိရာ Youtube ကို app ကိုသွားပါ။ သတင်းအချက်အလက်များမှတဆင့် scroll နှင့်အသွင်ပြောင်းသောဗီဒီယို hosting အတွက်များ၏ function ကိုဝင်ရောက်ဖို့မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်မှာလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထိ။
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကိုမှတ်ဥာဏ်ကို iPhone တွင် YouTube catalog မှဗီဒီယို၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်, သို့သော်ရှေ့မှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ဆက်စပ်သော parameters တွေကိုများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆုံးဖြတ်ရန်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်:
ထို့နောက်မျက်နှာပြင်၏ထိပ်မှာသင့်အကောင့်၏ Tapnite ကိုယ်ပွား, select လုပ်ပါ "Settings" ကို ရွေးချယ်မှုစာရင်းထဲမှာတော့;
ကလစ်ပ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် parameters တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ "Settings" ကို အပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ် "ဒေါင်းလုဒ်များ"သူ့ကိုရွေးချယ်မှုစာရင်းထဲကိုဆင်းပွတ်ဆွဲကိုရှာပါ။ ဤတွင်သာနှစ်ခုပစ္စည်းများတွေ့ပါ - ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေမှတပါးရလဒ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများတံ့သော, အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကိုရွေးပါနှင့်, switch ကိုသက်ဝင်စေ "သာက Wi-Fi ကိုမှတဆင့် Download လုပ်"သင်ဆယ်လူလာဒေတာကွန်ရက်မှကန့်သတ် connection ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက။
သငျသညျ YouTube ကို၏အခန်းကဏ္ဍတွင်မဆို, အော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုများအတွက် iPhone ကိုမှတ်ဉာဏ်အတွက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်လိုသောဗီဒီယိုကိုရှာပါ။ ပြန်ကျော့မျက်နှာပြင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရုပ်ရှင်၏နာမကိုထိပုတ်ပါ။
ဗီဒီယိုကစားသမားဧရိယာအောက်ကလျှောက်လွှာ၏ပုံမှန်ဗားရှင်းမရှိခြင်းအပါအဝင်ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာသက်ဆိုင်သောဖြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသော functions များ, အဘို့ခလုတ်ပါရှိသည် - "Save" နှိမ့်ချညွှန်ပြကာမြှားနဲ့စက်ဝိုင်း၏ပုံစံ။ ဒါဟာ button ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည် - ကကလစ်နှိပ်ပါ။ ဖုန်းလျှောက်လွှာအတွက်အာကာသကယ်ဖို့ရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးစွမ်းသည် (သတ်မှတ်ထားတဲ့အများဆုံးတန်ဖိုးဆွေမျိုးလျော့ "Settings" ကို) ကသိမ်းထားတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုအရည်အသွေး, ပြီးတော့ဒေါင်းလုပ်စတင်ဖို့။ ခလုတ်ကိုမှတ်ချက် "Save" - သူမ၏ပုံရိပ်ကိုကာတွန်းနှင့်မြို့ပတ်ရထားတိုးတက်မှုဘားကို download တပ်ဆင်ထားပါလိမ့်မည်။
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးသတ်မှတ်ထားသောကို item ၏ပြီးစီးအပေါ်သို့ iPhone ကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဖိုင်ဒေါင်းလုပ်ဗီဒီယိုများအစပျိုးအလယ်၌တစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားနှင့်အတူအပြာရောင်စက်ဝိုင်းဖြစ်လာသည်။
နောက်ပိုင်း, YouTube ကို directory ကိုကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်ဗီဒီယိုခွဲဝေမှု app ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အပိုင်းကိုသွား "စာကြည့်တိုက်"မျက်နှာပြင်ရဲ့ညာဘက်အောက်မှာ icon ကိုနှိပ်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကဗီဒီယို, သင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားမရ, သူတို့ကိုမဆို၏ပြန်ဖွင်စတင်နိုင်ပါသည်သည့်အခါကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏အပေါင်းတို့၏စာရင်းတစ်ခုရှိသေး၏။
အားလုံး Third-party apps များ, Extension, သင်ယူကျု့မှဗီဒီယိုများဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြုသောအခြား "ချိုင်းထောက်" ကိုဆနျ့ကငျြဘတှငျကြှနျုပျတို့ပရီမီယံ-ကြေးပေးသွင်းမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတစ် option ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်, ပညတ္တိကျမ်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု၏အသုံးပြုမှုကို၏စည်းမျဉ်းများ, ဒါပေမယ့်လည်းအများဆုံးရိုးရှင်းသောချိုးဖောက်ပါဘူး, မသာတရားဝင်ဖြစ်ပါသည် ကိုလည်းအပိုဆောင်း features တွေများစွာပေးထားပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထိရောက်မှုဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ဖြစ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ မည်သို့ပင်သင့်မိုဘိုင်း device ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ထားတဲ့ပလက်ဖောင်းများ - iOS ကိုဒါမှမဟုတ် Android, သင်အမြဲမဆိုဗွီဒီယို Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်, ပြီးတော့အော့ဖ်လိုင်းကစောင့်နေကြလော့။